Antony dimy hampiasana milina fanapahana laser mazava tsara
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-13
Ny fanapahana laser dia karazana tsy misy fifandraisana, miorina amin'ny dingan'ny famokarana hafanana izay manambatra ny hafanana mifantoka sy ny angovo hafanana, ary mampihatra tsindry handrendahana sy hanaparitaka fitaovana amin'ny lalana tery na ny incision. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana nentim-paharazana dia manana tombony maro ny fanapahana laser. Ny tena mifantoka ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny herin'ny milina fantsom-boasary?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-04
Amin'ny fiainana andavanandro, matetika isika dia manondro ny fantsom-by miaraka amin'ny fantsom-by, fa amin'ny sehatry ny fanapahana fantsom-panafody dia tsy maintsy manavaka isika raha ny vy dia fantsom-by vy, fantsom-by vy silikika, fantsom-by tsy misy fangarony, fantsom-by firaka titanium na fantsom-firaka aliminioma. . Satria samy hafa ny fitaovana ...
Inona avy ireo lesoka mahazatra sy fitsaboana amin'ny masinina manapaka laser?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-30
Rehefa mampiasa milina fanapahana laser dia matetika mipoitra ny olana noho ny fotoana maharitra fampiasana, ny tontolo iainana feno vovoka ary ny kalitaon'ny mpandraharaha. Inona no tokony hataoko raha misy ny olana mahazatra? Voalohany, tsy misy programa ho an'ny fanombohana ara-dalàna: Fahombiazana amin'ny tsy fahombiazana: ny fahefana lehibe ...
Fiaraha-miasa sambatra ao amin'ny IE expo China 2021
Tamin'ny 22 aprily, IE expo China 2021 dia nahavita tany Shanghai, Sina. Nametraka fifandraisana ara-barotra tsara amin'ireo mpanjifa manerana an'izao tontolo izao izahay. Nasehonay ny vokatra sasany tao amin'ny Fair, toy ny milina fanapahana laser laser metaly, milina fanapahana fantsom-by laser, takelaka ...
Amin'ny fomba ahoana no ahafahana mampiasa milina fanapahana laser laser ankehitriny?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-13
Ny fanapahana laser dia ny fanoloana ny antsy mekanika nentim-paharazana amin'ny andry tsy hita. Izy io dia manana ny mampiavaka ny avo lenta, haingam-pandeha haingam-pandeha, tsy voafetra amin'ny lamina fanapahana, fananganana karazana automatique, fitaovana fitsitsiana, fanapahana malefaka ary vidin'ny fikarakarana ambany. Hihatsara tsikelikely ...
Ny fampiasana fitaovana milina fanapahana laser amin'ny fitaovana indostrialy
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny siansa sy ny teknolojia, ny milina fanapahana laser fibre dia nanjary be mpampiasa kokoa eo amin'ny tsenan'ny indostria. Ny milina fanapahana laser dia manana fahitsiana avo lenta sy hafainganam-pandeha haingana, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa amin'ny 60% ary mitahiry vola bebe kokoa. Noho izany, izy ireo ...
Ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka amin'ny fitaovana fanapahana laser anao
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-03
Ny fanapahana laser laser dia misy fitaovana mandroso izay mitaky fikolokoloana tsy tapaka mba hahazoana antoka fa misy fahombiazana avo lenta. Rehefa dinihina tokoa, ny fanapahana laser dia momba ny marimarina kokoa, noho izany ny fitazonana ny masinanao amin'ny toe-javatra avo indrindra dia zava-dehibe amin'ny fahazoana ny valiny antenainao na ny mpanjifanao. Raha tsy misy ny fikolokoloana pl mety ...
Manapaka ny toetran'ny laser laser amin'ny milina fanapahana laser
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-03-14
Miaraka amin'ny fampiasana mahery vaika ny milina fanapahana laser metaly fibre, ny haitao amin'ny indostrian'ny laser dia havaozina sy havaozina tsy tapaka, izay manome fahafaha-manao amin'ny fanodinana sy ny famokarana, mitahiry ny vidin'ny asa ary manatsara be ny famokarana sy ny fidiram-bola ...
Masinina marika fanapahana laser an'ny milina anatiny, ahoana ny kalitaony?
raha mitady marika metallaser fanapahana masinina ok ianao? Mpanjifa maro alohan'ny hisafidianana ny milina fanapahana laser no hikarakara ny vokatra azo avy amin'ny marika fitaovana, izany hoe mitovy amin'ny lazan'ny olona any ivelany, avy eo ny laharan'ny marika fanapahana laser dia Wei Qian, sudde ...
Ahoana ny fomba hamongorana sy hanatsarana ny hafainganana sy ny vokatry ny milina fanapahana laser?
Ny singa amin'ny fanapahana laser dia betsaka kokoa, ny ampahany sasany amin'ny vanim-potoana fikojakojana dia somary fohy ihany, ny milina fanapahana laser matetika hitazomana. Ahoana ny fomba hamafana ny masinina fanapahana laser? Ahoana ny fomba fanaovana debug mba hahavoa haingana kokoa azy io? Mila mitazona matetika, mba hitazomana tsara ...
Famolavolana sy fitsipiky ny miasa amin'ny milina fanapahana fantsom-laser
Ny fanodinana laser an'ny milina fanapahana fantsom-laser dia vita amin'ny alàlan'ny sary amin'ny alàlan'ny solosaina, izay tsotra sy mora ampiasaina. Eo amin'ny sehatry ny fikirakirana sary dia afaka mameno ny fanodinana azo atao ny sary rehetra. Ary afaka mahatsapa ambaratonga lehibe, avo lenta, h ...
Fampiharana masinina manapaka laser amin'ny fanapahana fitaovana varahina
Ny milina fanapahana laser fibre dia azo ampiharina amin'ny fanapahana fitaovana maro karazana. Faritra jamba foana izy io tamin'ny fanapahana metaly. Niova izy tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tao anatin'izay taona faramparany, dia natsangana tsikelikely tamin'ny fampiharana fanapahana ny produ varahina ...